Itoobiya oo hakisay saamigii ay ku laheyd dekedda Berbera una weecisay dal kale – Hornafrik Media Network
Itoobiya oo hakisay saamigii ay ku laheyd dekedda Berbera una weecisay dal kale
By Liibaan Nuur	 On Mar 10, 2020
Wargeyska Capital ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa qoray warbixin tilmaameysa in dowladda Itoobiya ay kansashay saamigii maalgashi oo ay ku laheyd dekedda magaalada Berbera ee waqooyiga Soomaaliya.
Wargeyska ayaa daabacay in todobaadkii lasoo dhaafay dowladda Itoobiya ay hakisay saamiga maalgashigii ay ku laheyd dhismaha iyo ballaarinta dekedda Berbera oo la sheegay in uu gaarayey 19%, iyadoo warbixintan lagu sheegay in Itoobiya maalgashigaas ay u weecisay deked kale oo ku taalla dalka Suudaan.
“Itoobiay waxay saami ah 19% ka qaadatay horumarinta dekedda Berbera, balse waxa todobaadkan la soo weriyay in mashruuca si buuxda loo joojiyay” ayaa lagu yiri warbixinta Wargeyska.
Arrintaan ayaa ku soo aadeysa, iyadoo dhowaan dowladda isu-tagga Imaaraadka Carabta ay ka laabatay qorshihii saldhigga militeri ee magaalada Berbere, welina xukuumadda Somaliland kama soo bixin wax war ah oo ku aadan arrimahaan is xigxigay ee ka soo yeeray dowladaha Itoobiya iyo Imaaraadka.
Culimada Kenya oo baaq ku aadan xiisadda kala dhaxeysa Soomaaliya u dirtay dowladooda Kenya
RW Kheyre oo xarigga ka jaray garoonka diyaaradaha degmada Baraawe